TOMPONDAKA NASIONALY AMIN’NY BAOLINA KITRA U13 – Région Haute Matsiatra
TOMPONDAKA NASIONALY AMIN’NY BAOLINA KITRA U13
Noraisin’Andriamatoa Governora tao amin’ny Lapan’ny Faritra ireo zanaky ny Faritra Matsiatra Ambony , Tompondaka nasionaly amin’ny Baolina kitra U 13 avy nandrombaka ny Coupe Nelson Mandela, nandraisan’ireo klioba solotena avy amin’ny lafivalon’ny Nosy.
Nanolotra lelavola hoan’ireto katitakely ireto ny Governora ary nampanatena azy ireo fa hanampy amin’ny handraisan’izy ireo anjara amin’ny fanatanterahana ny fifaninana iraisam-pirenena hatrehan’izy ireo atsy Afrika Atsimo ny taona 2020.Nisy ihany koa ny maillot natolotra ny Club Tsaraofana sy ny Ligin’ny Baolina Kitra eto Fianarantsoa. Izany dia vokatry ny fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’Andriamatoa Lova RAZAFINDRAFITO hatramin’hy naha Depioten’ Ifanadiana azy, sy ny Lyons Club Perpignan Castillet ary ny SIAFM France.
Ho setrin’ny fangatahan’ireo mpitantana fanatanjahan-tena eto Fianarantsoa dia nampanatena izy fa hampita izany amin’ny Filoham-pirenena, ary hoan’ny Faritra Matsiatra Ambony manokana dia hisy ny sampandraharaha hiandraikitra manokana ny tanora sy ny fanatanjahantena.
FANKALAZANA REZIONALY 8 MARSA 2020
👍« Izaho sy ianao, isika rehetra miombon’andraikitra ho fisitrahan’ny vehivavy ny zony »Tontosa soa amantsara...
rhm_18 mars 2020
FAMINDRAM-PITANTANANA SEKIRETERA JENERALIN’NY FARITRA MAHATSIATRA AMBONY
Tontosa soa amantsara tamin’ity androany ity ny famindram-pitantanana teo amin-dRamatoa LALAONIRINA Zaïèlle, Sekiretera Jeneraly teo...
rhm_112 novembre 2019
UNIVERSITE DE FIANARANTSOA. FANKALAZANA NY JOBILY FAHA 40 TAONA TETO AMIN’NY FARITRA MATSIATRA AMBONY
Fahombiazana no azo ilazana ny fankalazana ny faha 40 taonan’ny Universite n’i Fianarantsoa, izay nofaranana...
rhm_112 décembre 2017